DOODA FURAN : MIISAANKA MAANSADA EE GAARIYE IYO MIISAANKA MAANSADA EE ….. | Toggaherer's Blog
« DOODA FURAN: MIISAANKA MAANSADA EE GAARRIYE IYO MIISAANKA MAANSADA EE CARAALE MIDKEE TAYO BADAN?
HAMBALYO DHALASHO WIIL KHEYR QABA. »
DOODA FURAN : MIISAANKA MAANSADA EE GAARIYE IYO MIISAANKA MAANSADA EE …..
RE:DOODA FURAN: MIISAANKA MAANSADA EE GAARRIYE IYO MIISAANKA MAANSADA EE CARAALE MIDKEE TAYO BADAN?
Waxaan ku bilaabaya magaca eebe kor ahaaye. Salaanta Islaamka ayaan salaamaya dhamaan dadka akhrista fariinten, waxaan salaamaya websiteyada sii daaya fariintan iyo weliba Qoraaga hibada iyo hal abuurnimada eebe ku maneystey ee Sicid Mohamed Gaheyr oo isagu ibo furay doodan aan ka hadli doono.
Inta ka dib waxaan damcey inaan in yar ka idhaahdo Dooda xiisaba badan ee uu Abwaanka Siciid Mohamed ugu magac darey. Miisanka Maansada ee Gaariye iyo Careele midkee Tayo Badan?. Siciid iyo Anigu toona ma nihin cidii ugu horeysay ee arinta wax ka qorta ama ka hadasha, balse waxaa jirey rag badan oo hore oo arinta ka hadley anigoo filaya iney qaar danbena ka hadli doonaan, aakhirkana la helo doono cid intey ururiso maxsuul ka soo saarta.
Ka hadalka aan amuurtan ka hadli doona waxa bud dhig u ahaaan doona laba qodob oo kala ah 1.Inta aan anigu shaqsi ahaan ka fahmey amuurtan iyo 2.Inta aan ka ogaa go`aankii ka soo baxey Gartii ay qaadeen Guurtidii dhageysatey wixii ay soo bandhigeen Abwaanka Gaariye iyo Macalinka suugaaneed ee Caraale doodii ka dhacdey magaalada Oslo ee dalka Norway.
1.Aan ku horeeyo sida aan anigu u fahmey. Horta anigu ma ihi abwaan iyo hal abuur toona, hadana Maansada la tiriyo waxaan ahey nin arki kara halka ay tuurta ka leedahay ama uu laaximku kaga jiro, midhka ku dheeraadka ah iyo halka uu midh ka dhiman yahey. Sidoo kale Af Somaliga laftiisa ayaan aqaan ninka ku saxda dareerkisa iyo ninka hibada u leh in marka uu hadlayo lagu khasbanaado in la dhegeysto.
Anigoo hadaba aqoonteyda hadlaya waxaan u fahmey in labada odey uu mid kasta Miiisamey waxa uu rabi hibo u siiyey hadii ay naqoto mid dabiici ah iyo hadey noqoto mid dugsigyo laga barteyba. Dabeed waxey aqoonteyda qofnimo i siisey in labada Macalin uu mid kastaa jeexayey laba wado oo marka danbe meel isugu imanaya, kuwaas oo kala ah.
A.In waxa uu miisamey Caraale uu yahey dhamaan Afka Somaliga oo dhan hadii ay tahey hawraar iyo hadii ay tahey hadalba. Waxaana arintaa halbeeg u ah in mar hadii uu Caraale yahey nin ku takhakhusey cilmiga barashada luqdaha, in miisaankiisu uu si dhameystiran u dheeli tiri karo luqada Afsomaliga. Miisankiisuna uu yahey mid u sahli kara barashada qofkii aan aqoon luqda Somaliga iyo weliba qofkii si weyda u yaqaanba. Tusaale ahaan Caraale mar uu ku dhex jirey cadeyntiisa miisanka maansada ayaa waxa uu si cad u miisaameyay weedho aan aheyn Maanso ama Hawraar ee hadal ah sida magaca (Cali), oo uu kala qaadayey Ca iyo Li.
Ma aheyn mar iyo laba inta uu Caraale samuuradii madasha taaley ku xardhye ama uu ku miisamey, erayo aan aheyn Suugaan, balse marar badan ayey dhaceysay inuu miismo hadalo caadi oo ka mida kuwa aynu maalin kasta isticimaalo.
Waxaan aad ula dhegdhegey iyadoo marmarka qaarkood uu caaraale u ekaanayey Macalimiintii i bareytey luqada Afka Norweigianka, waxaanan mararka qaarkood u is moodayey inaan ahey, ardey uu Caraale barayo Afka, Somaliga. Bal hada u fiirso weedhani iyo inta dhawaaq ee marka danbe ay sameyn doonto (ISAGOO ARINTAA KA HADLAAYA). Hadana eeg I-SA-GOO A-RIN-TAA, KA, HAD-LAA-YA. Weedhii sadexda kelmadood aheyd waxey u qeysantey toban dhawaaq oo mid kasta carabku ku dul nasanayo. Waa dariiqoonyinku uu adeegsanyey Prof Caraale., isagoo hadal iyo hawraar labadaba kolba kuu doono adeegsanayey.
Markaa waxa la odhan karaa Siisaba Caraale waa Macilinka Miisanka luqada Somaliga, hadey noqoto hadal iyo Hawraarba.
B.In waxa uu miisamey Gaariye ay tahey Hawaarta Maansada iyo inta dhudood ee ay ku kala baxdo. Waxa uu gaariye dhan kasta u dhigey rogrogey oo weeteeyay inta bahood ee maansadu u kala baxdo. Inuu gaariye miisamo maansda iyo suugaanta Somalida waxaa u sahlaayey laba shey oo kala ah isaga oo ah nin Awbaana oo hibo u leh inuu curiyo oo dareeriyo Maansada Somalida. Gaariye ayaa madasha doodu aan keliya kaga hadleyn sida loo dheeli taro maanso oo keliya balse marmarka qaarkood gacanta gelineyay sida laxamka heesi qalaadi leedahey loo saari karo hees Somali ah. Gaariye wuxuu si cilmiyeysan ii fahamsiinayey arintii Caqligu sida Rabaaniga ah u dareemayey, markaan arko ama aan maqli Maasno aan aan gun iyo baar ka sineyn oo tuuro leh. Bal hada u fiirso halkan. (HADEY LABA LIBAAX OO TAGANI, TULUD WADAAGEYSO MID UUN BAA ILAHKAHA UMA TUDHEE CUNA TAGOOGAYE). Bal markana eeg.(HADEY LABA LIBAAX OO TAGANI WADAAGESYO TULUD, MIDUUNBA ILAKAHA UMA TUDHEE TAGOOGAHA CUNA E.). Isku mid ma aha lakiin qofkii aan Afsomliga hodan ka aheyn, gabey dhaadhina aan aheyn isaga waa isugu mid. Markaa Gaariye waxa uu iftiiminaya Qaaciido lagu Miisamo karo halka midhka khaldan ama laaximku ku jiro.
Iyadoo kooban Gaariye waxa uu si farshaxnimo ah oo kooban u soo bandhigeyey sida loo miisami karo keliya Maanso Somaliyeed. Waxaan la odhan karaa Gaaariye waa macalinka Miisanka Maansada.
2.Hadii intaa aan ku dhaafi inta aan qof ahaan ka fahmey waxa loogu yeedho Miisaanka maasda ee ay Gaariye iyo Caraale ku mursan yihiin kooda hor curiyey, waxaan iyadana in yar ka odhan lahaa, go`aankii ka soo saareen guurtidii Oslo ee ahaa inuu Gaariye yahey ninka hor bilaabey ama hor curiyey Miisanka Maansada.
Anigoo aan hadalkeyga sumad u yeelaya marnaba la iga maqli maayo, inaan idhaahdo hebel buu ahaa ninkii u horeeyay helida qaaciidada Miisanka hadii ay tahey mid Afsomali ah iyo hadii ay tahey mid Sugaaneedba. Mana aha ujeedada qoraalkeygani inaa idhaado Gaariye muu aheyn ninkii arintaa hor curiyey. Waxaanse hoosta ka xariiqaya inuu go`aankii Oslo ahaa mid indha la`aan ah oo aan laheyn wax sal iyo raada toona. Sababta aan go`aankaa ku daadifeynaya waxa weeye. Marka hore dadka go`aankaa gaadhey kumey jirin dad aqoon u leh Suugaanta ama maansada marka laga reebo hal xumina oo ku dhix milantey ama meel uu ka maro waayey intii kale oo ka badneyd, marka xigta Guurtidaasi waqti iyo juhdi midna mey siin iney arintaa u galaan sida ugu saxsan ee xaqiiqda lagu heli karayey, oo aheyd iney arinta u ogalaadeen ama geedka ugu geeyaan raga Somalida ah ee Abwaanada iyo aqooyahanadaba ah ee ehelka u ahaa waxa laga hadleyey, iyo goob joogayaal la sheego oo arintan wax badan ka ogaa laga soo bilaabo mudo ka badan rubuc qarni. Hubaal wuxuu ahaa go`aan midi rooto ah, oo lagu degdegey. Sideeba Gudi arin gashey waxaa loo qeybiyaa sadex.
B.Gudi geftey ama eexatey
C.Iyo gudi garan weyday. Waa gudi gashey ama go`aamisey wax aaney gareynin oo aaney aqoon u aheyn.
Marka Gudidii Oslo waxey aheyd Gudi garan weyday. Eexi may jirin lakiin aqoon la`aan sugaaneed, hubaal bey aheyd.
Waxaa iyadan mudan inaan isku dayo inaan ka jawaabo su`aasha ah labada Miisaan ee labada Aqoonyanan soo bandhigeen keeba Tayo badan?. Anigu waxaan ku jawaabi lahaa labadaba tayo ayaa ku jirta. Ka caraale sidaan kor ku soo sheegey Barshada Afka Somaliga ayuu tayo u leeyay (Xusuusno Af Somaliga ayey sugaantuna hoos imaneysa). Halka uu Miisanka gaariye manco badan u sameynayo inta bahood ee ay Sugaantu u kala baxdo. Waxaan qabaa iney yihiin laba dukaan oo Alaaboyin kala duwan dhana isaga eg iibinaya.
Dhanka kale sida uuSiciid sheegey ayaan ku raacsney iney arintan galaan dad meel ku tiiraya bal hada labada miisaan ka la qaadanayo, ama hadii labadaba la is waafajinayo iyo hadii midba sidiisa loo horumaniyo. Dadkaasi waa iney noqdaan dad ay shuruud u tahey.
1.iney aqoon durgsan oo baac fog u leeyihiin waxa laga hadlayo. Cilmi iyo Caqligba.
2.Iney yihiin dad ka badax baanaan xanuunka xun ee Somalida baabiyey ee Qabyaadada.
Allow eex ma tiraabine Aqoon ha igu cadaabin